Maxkamadda Ciidamada oo sii deysay Askar lagu Caddeyn waayey Dembi lagu soo oogay - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Maxkamadda Ciidamada oo sii deysay Askar lagu Caddeyn waayey Dembi lagu soo oogay
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ayaa amartay in xoriyadooda la siiyo afar eedeysane oo loo heystay burcadnimo, iyagoo ka tirsanaa ciidamada Asluubta Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay sii deynta eedeysanayaasha markii maxkamaddu ku weysay dembigii loo heystay caddeymo ku filan.
Xafiiska Xeer ilaalinta ayaa soo bandhigi waayay wax dhaafsan eedda ay soo jeediyeen taliska Saldhiga Boliiska Dharkeynley iyo Ilaalada deeganka Garsabaaley. Garsoorayaasha ayaa dalbaday in la keeno caddeymo dheeraad ah oo markale la isusgu soo noqdo fadhiga Maxkamadda.
RW Rooble oo la kulmay musharrixii 2aad